Ady amin’ny pesta : nanolotra fitaovana mitentina 1,5 miliara Ar ny Sinoa | NewsMada
Ady amin’ny pesta : nanolotra fitaovana mitentina 1,5 miliara Ar ny Sinoa
Noraisina tamin’ny fomba ofisialy, omaly, teny amin’ny Salama Tanjombato ny fitaovana entina hiadiana amin’ny valanaretina pesta avy amin’ny repoblika entim-bahoakan’i Sina, izay notarihin’ny masoivoho, Shen Yongxiang . Nandray izany ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Ahitana tapim-bava, “seringue”, akanjo fiarovana amin’ny aretina, fandriana ho an’ny hopitaly, solomaso fiarovana sy baoty fiarovana, … izany fitaovana izany.
Nambaran’ny masoivohon’i Sina fa fanampiana fanampiny izao atolotra izao. Efa nisy ny tolotra manokana tamin’ny 12 oktobra teo izay nitentina 220 tapitrisa dolara. Misy koa ny manam-pahaizana sinoa miasa eny amin’ny hopitaly manara-penitra eny Anosiala mifarimbona amin’ireo dokotera sy mpiasan’ny fahasalamana eny amin’ny fiahiana ny mararin’ny pesta.
Nilaza ny praiminisitra fa tsy manary ny Malagasy ny Sinoa amin’ny zava-mitranga eto amin’ny firenena. Maneho firaisankina hatrany izy ireo ary manoina ny antso hatao rehefa angatahina fiaraha-miasa.
Nanamarika ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Andriamanarivo Lalatiana, fa efa voafehy ny aretina pesta amin’izao fotoana. Tsy nisy intsony ny maty tao anatin’ny telo andro izao eny fa na tany Toamasina, toerana nampirongatra ny aretina aza.
Mbola am-perinasa avokoa ireo toerana fanaraha-maso manokana hahafahana mijery akaiky ireo olona ilana fizaham-pahasalamana sy mbola mihinam-panafody.